Prof. Gees oo Sheegay in Somaliland ku Fashilantay inay Buuxiso Afar Qodob oo Lagu Qiimeeyo Dalalka Afrika | Araweelo News Network
Prof. Gees oo Sheegay in Somaliland ku Fashilantay inay Buuxiso Afar Qodob oo Lagu Qiimeeyo Dalalka Afrika
Hargeysa (ANN)Prof. Maxamed Siciid Gees oo ka mid ah siyaasiyiinta aqoonyahanka ah ee reer Somaliland, ayaa sheegay in dalka Jamhuuriyadda Somaliland buuxin waayey afar qodob oo Hay’ad caalami ah ku qiimayso dalalka Afrika oo ay abaalmarino siiso madaxtooda xilka ku yimaad, kuna banneeyo hab dimuqraadi ah oo doorashooyin xor iyo xallaal ah ku salaysan.
Prof. Gees, ayaa qaybta 40aad ee qormadiisa toddobaadlaha ah ee Dharaaro Xusuustood ee Khamiista maanta ku sheegay in hay’adaha dawladda Somaliland ku guul-daraysteen inay buuxiyaan afar qodob oo hay’adda la yidhaah Mo Ibrahim Foundation ku qiimayso dalalka dimuqraadiga ah ee qaaradda Afrika, waxa kaloo uu iftiimiyey dhibaatooyinka hoggaamiyaha keli-taliska ah u gaysto ummaddiisa, isagoo sheegay in dhinaca kale Somaliland daris la tahay dalal aan dimuqraadi ahayn.
Qormada Dharaaro Xusuustood ee Prof. Gees oo faahfaahsan waxay u qornayd sidan;
“Walaalnimo ninkii dilay hadduu cabasho daynwaayo
Xaajooyin duugnaa oo daalay baa imane
Waa lay damqaayaaye inaan furo ma doonayne
Anigoon dalkeeniyo fadhiyin degeladii saaxil oo
Higilku ii yahay dugsi oo wehel ka doonaaya”
Tuducyadan gabaygan oo uu tiriyey Marxuun Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal markii Afgooye lagu xidhay ee askartu afgembiday xukuumaddii (Somali Republic) ama Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed sannadkii 1969 ee madaxa uu ka ahaa, waxan ka soo qaatay mareegta Aftahan oo uu ku duubay si qoto dheerna uu uga hadlayo Suldan Xandule.
Haddaba, markii Xabsigii Labaatan-jiro laga soo daayey Marxuunka sannadkii 1976, isaga oo markaas xidhnaa toddoba sanno, waxa ku soo booqday gurigii uu deganaa laba nin oo reer Somaliland ahaa oo ay macruuf ahaayeen muddo badan, markii ay sheekaysteen, isna waraysteen ayuu u tiriyey gabaygan uu jeelka ku curiyey. Siday u dhacdayba gabaygii waxa uu gaadhay Sirdoonkii Dawladda, kadibna habeenkii dambe ayaa Cigaal looga yeedhay Madaxtooyadii oo uu la kulmay Siyaad Barre. Si lama filaan ah ayuu Siyaad Barre u tiriyey dhawr tuduc oo gabaygan ka mid ahaa, deeto Cigaal ayuu ku yidhi; “Maxamed, dhammaystir gabaygan aad tirisay, illeyn jeelkii gabyaa ayaad ku soo noqotay.”
Marxuum Cigaal waxa uu sheegay isagoo aan weli jawaabin oo fekeraya, jiqna ay ku tahay, waxa xafiiskii ugu soo galay Maxamed Cali Samatar (Madaxweyne-ku-xigeenkii) iyo Axmed Saleebaan Dafle (Madaxii Nabad-suggidda NSS), markaas ayuu Cigaal ku yidhi Siyaad Barre, “Madaxweyne, hadda Odayaal ayaa innagu soo kordhay ee arrintaasi dib ha ii weydiinin.” Siday u dhacdayba Siyaad dib uma weydiin, lamana soo qaadin mar dambe gabaygii.
Odayaal ka soo jeeda degaanka Laasqoray ayaan maalin u geeyey marxuun Cigaal sannadkii 2001, markii aan u kala sheegay, isna baray odayaashii ayuu mid ka mid ahaa gartay aabbihii, waxaannu ku yidhi odaygii; “Waqtigii aan xabsiga ka soo baxay ayaan maalin la i geeyey Huteelkii Jubba ee Muqdisho, halkaasoo ay fadhiyeen rag aan is-wada garanaynay oo reer Somaliland ahaa, mid i salaama ayaa laga waayey. Waxa ii soo kacay aabbahaa Xaaji Ibraahim Saalax (Ibraahim Tuur) oo si kalgacaltooyo ah ii salaamay, raggii kale waa ku dhici waayeen.” Gabaygan waxa uu ku socdo reer Somaliland, gaar ahaan beelaha dhexe. Marxuun Cigaal mar dambe ayaa haddana Jeelkii Labaatan-jiro lagu celiyey, halkaas oo uu ku jiray ilaa 1982, waxana uu isugeyntii xidhnaa 12 sanno.
Sanandkii 2000 waxa Hargeysa ku soo booqday Jeneraal Maxamed Abshir Muuse oo ay Jeelka Labaatan-jiro ku wada jireen, si fiican ayuu u soo dhaweeyey, una sooryeeyey, kadibna Jeneraal Abshir ayaa warbaahinta la hadlay oo sheegay in Marxuun Cigaal jeelka ku baray qur’aanka karriimka ah.
Haddaba, mar Marxuun Cigaal arrintaas nooga sheekeeyey, waxa uu noo sheegay in Maxamed Abshir uu isagu xidhnaa 13 sanno oo uu hal sanno dheeraa, waxa kaloo uu sheegay in Abshir uu Qur’aanka kor u akhriyi jiray, deeto kitaabkii Qur’aanka ahaa ayaa qoladii jeelku ka qaaday, meel uu ka akhriyo qur’aankii ayuu waayey. Waraaqo ayaan ugu soo qoray suurado badan oo aan korka ka hayey, deeto waqtigii biririfta nala siiyey ee qolalka nalaga soo saaray ayaan warqadihii hoosta ka siiyey, sidaas ayuu Abshir u leeyahay Cigaal ayaa qur’aanka i baray.
Waqtigaa dheer ee uu jeelka ku go’doomay, badanaa kuma sii tiigaali jirin oo kama sheekayn jirin marxuunku. Maalin aan fasax weydiistay, una sheegay in aan gaadhayo reerkaygii oo degan dalka Yemen ayuu igu yidhi; “Geesaw, carruurtayda isma naqaanno, oo markii ay korayeen ee aan is-baran lahayn waa ka maqnaa. Waxan ugu talogalay inay kala galaan Jaamacadaha Oxford iyo Cambridge ee dalka England, mase dhicin!!” maalintaas ayaan ka dareemay xoogaa hibasho ah (sadness). Keligii-talisnimadu waxay keentaa gabood-fal iyo ku-tumashada xuquuqda qofka.
Raggaasi madaxda ahaa ee nidaamka dimuqraadiga ku waday dalka iyo dadka waxa abaal looga dhigay iyaga iyo qaar kaloo badan in waqtigii noloshooda ugu fiicnaa ee ay wax taransan lahaayeen ama cid wax tari lahaayeen akhristaw inay ku abaadaan jeelal qol qol ah keligood.
Somaliland waxay deggan tahay xaafad jaar xun (Bad neighborhood) oo IGAD la dhaho. Dalalkaas oo keli-talisnimada ku caan ah, Madaxdoodu 30 ilaa labaatan sanno ay xukunka iska haystaan. Dimuqraadiyadda iyo xuquuqda adaamiga way ka aradan yihiin, kuwii ayaa nasiib-darrada dadka Soomaaliyeed abbaan looga dhigay. Maxay ka baranayaan? Waa halkii waraabahii yidhi; ‘Maxay ku jaqdaa maxayse ka jaqdaa.’ Markuu nirigtii farruuryaha goostay, hashiina naasahii goostay ee ninkii lahaa soo godol is-yidhi oo uu u yeedhyeedhay hashii.
Odayaashii iyo Islaamhii ina dejiyey kobtan ee reerka ku furay berri ammaankan ee intoodii badnayd ay xijaabatay ee aaday xaggii loo badnaa, qaarna ay hadda dariiqa sii hayaan Muxaafid iyo Mucaaradba inooma darnayn oo waa dedaaleen ee waxan ka baqayaa in da’da yaryar ee Somaliland ay xaafaddan jaarka xumi ibtilayso, durba qaar ayaa faro taag-taag ah iyo hadal han-jabaado ah laga hayaaye.
Nin maalqabeen Suudaani ah oo deggan dalka Ingiriiska, dhalashona ku leh oo la yidhaahdo Maxamed Ibraahim oo lacag laba bilyan oo doollar gaadhaa haysta, lacagtaas oo uu ka helay shirkad tellefoonka gacanta uu lahaa markuu iibshay; ayaa u guntaday in uu lacagtiisa wax kaga qabto siyaasadda dalalka Afrika, isaga oo ku taamayaa inuu horumariyo, kana midho-dhaliyo maamul-wanaag iyo dimuqraadiyadda ka hanoqaada dalalka Afrika.
Waxa uu samayeeyey Hay’ad uu u bixiyey “Mo Ibrahim Foundation” (Akhirstow, marka dadka magacoodu Maxamed yahay ay joogaan dalalka Khawaajaha (reer galbeedka) way qariyaan Maxamed-ka oo waxay u soo gaabshaan “Mo.” Hay’adaas oo uu ugu talogalay inuu ku horumariyo maamul-siyaasadeedka dalalka Afrika, uguna hiiliyo dimuqraadiyadda, xukun-wanaagga, Ilaalinta Xuquuqdada dadka, Xuquuqda Warbaahinta iyo Horumarka dadka, isaga oo ka duulaya sababta madaxda dalalka Afrika xukunka isugu sii dhejiyaan ay tahay dabo-ka-werwerka iyo baqdinta ay faqriga ka qabaan haddii ay xukunka ka degaan.
Sidaas darteed, waxa uu ugu ballanqaaday Madaxweynihii Afrikaan ah ee xukunka iskaga dega marka xilligiisu dhammaado ama ka horba oo ku dhaqa dalkiisa nidaam siyaasadeed hufan inta uu xilka hayo, inuu siinayo markuu xilka ka dego $5 milyan oo dollar iyo $200,000 (laba boqol oo kun doolar) sannadkiiba inta uu nool yahay.
Ilaa hadda waxa ku guulaystay abaalmarintaas afar Madaxweyne oo ka soo kala jeedda dalalka Mozambique, Cape Verde, Botswana iyo Namibia. Sida muuqata waa dalal yaryar oo tirada dadkoodu kooban tahay sida Somaliland. Somaliland waa hiigsan kartaa haddii siyaasiinteedu ku dedaasho himiladaas.
Sannadkii 2009 ayaa Akaademiga Nabadda iyo Horumarka – Somaliland la xidhiidhay Hay’adaasi Mo Ibrahim Foundation, si ay Somaliland ugu daraan qiimaynta dalalka Afrika dhinaca dimuqraadiyadda iyo maamul-wanaagga. Waxa Mo Ibrahim Foundation soo direen khabiir iyo kuwa joogay Akaademiga Nabadda iyo Horumarka Somaliland inay la shaqeeyaan, in bal sidii xog ururin laga sameeyo Somaliland afarta madax ee saldhigga u ah qiimaynta hay’addaas, kuwasoo kala ah;
1. Nabadgeyada iyo sharci-ku-dhaqanka
2. Ka-qaybgalka Siyaasadda iyo illaalinta xuuqda-adamiga (doorashooyinka, warbaahinta xorta ah)
3. Fursadaha dhaqaalaha oo u wada furan dadka
4. Horumarka nolosha dadka dhinaca; caafimaadka, waxbarashadda, biyaha, iyo nadaafadda.
Ayaan-darro, halbeegyadii qiimaynta lagu samaynayey iyo tirakoobkii ayaa laga waayey Hay’adihii Xukuumadda, sidaas darteed wax qiimayn ah laguma samayn; Wasaaradaha iyo Hay’adaha Dawladda Somaliland waxay u badan yihiin madax-ka-nool haddii aad hoos ugu dhaadhacdo waa cidla’ yahay, oo xogta la ururiyey ee aad ka helaysaa waa yar tahay ama ma jirto.
Nin Khawaaje ah oo kuwa dhawrtada bixiya ka tirsanaa ayaa waqtigaas igu yidhi; “Haddii aannu u baahnno tirakooba waxbarashada dalka waxa aannu ka qaadanaa INGO ama Hay’adaha UN-ta ee Wasaaradda Waxbarashada uma doonano oo ma hayso xogtaasi.
Akhristow, waxa is-weydiin leh maalqabeennada Soomaaliyeed ma ka fekeraan inay gacan-ka gaystaan maamul-wanaag dalalkooda, mise iyaga ayaaba ah dhibaatada saldhig u ah ‘Kula fidma cinda geela.’ Waa halkii ninkii turjumaanka ahaaye!